(၁၂-၅-၂၀၂၀ - ည ၈:၀၀ နာရီသတင်း) တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှလှူဒါန်းသည့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံရောက်ရှိ၊ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဆေးအဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ | cincds
(၁၂-၅-၂၀၂၀ - ည ၈:၀၀ နာရီသတင်း) တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှလှူဒါန်းသည့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံရောက်ရှိ၊ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဆေးအဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှလှူဒါန်းသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုဆေးပစ္စည်းများထပ်မံရောက်ရှိ၊ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဆေးအဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့လှူဒါန်းသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် အထောက်အကူပြု ဆေးပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသော တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(လေ)မှ လေယာဉ်သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာရာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E.Mr. Chen Hai ၊ တရုတ်စစ်သံမှူးSenior Colonel Xiong Shaowei နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌် ကြိုဆိုကြသည်။
တို့နောက် အဆိုပါလေယာဉ်နှင့်အတူပါရှိလာသော တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့လှူဒါန်းသည့် PPE ဝတ်စုံ ၁၀၀၀၀ စုံကို တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုယ်စား စစ်သံမှူးက လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ တိုင်းမှူးက လက်ခံရယူခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ပေးအပ်လှူဒါန်းမှုကို ပြည်တွင်း ပြည်ပမီဒီယာများက လာရောက်သတင်းရယူခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် အဆိုပါဆေးပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသည့်လေယာဉ်သည် ည ၈ နာရီတွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာရာ Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိ နေသည့်တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ Dr. Bai Chong ၊ ဦးဆောင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်(၆) ဦး ပြန်လည် လိုက်ပါသွားကြောင်း သိရသည်။
ပြန်လည်မထွက်ခွာမီ အဆိုပါ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Dr. Bai Chong နှင့်အဖွဲ့အား မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) ဆေးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းက Video Call ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ထိန်ချုပ်ရေးနှင့်ကုသရေးလုပ်ငန်း များတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဆောင်ရွက်မှုအတွင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက် နေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မြန်မာ့တပ်မတော်၏ COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် လာရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများ၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆေးတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အချိန်တိုအတွင်း အောင်အောင်မြင်မြင် ကုသထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံကောင်းများကိုမျှဝေပေးခဲ့မှု နှင့် အထောက်အကူပြုဆေးပစ္စည်းများပေးပို့လှူဒါန်းမှုများအတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရာ တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်း ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့် အပြန်အလှန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဆေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပတ်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆေးဘက် ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွလႉဒါန္းသည့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳေဆးပစၥည္းမ်ားထပ္မံေရာက္ရွိ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေဆးအဖြဲ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာ
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သို႔လႉဒါန္းသည့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆးပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလယာဥ္သည္ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာရာ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ အမတ္ႀကီး H.E.Mr. Chen Hai ၊ တ႐ုတ္စစ္သံမႉးSenior Colonel Xiong Shaowei ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္၌္ ႀကိဳဆိုၾကသည္။
တို႔ေနာက္ အဆိုပါေလယာဥ္ႏွင့္အတူပါရွိလာေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သို႔လႉဒါန္းသည့္ PPE ဝတ္စုံ ၁၀၀၀၀ စုံကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကိုယ္စား စစ္သံမႉးက လိုအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ တိုင္းမႉးက လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေပးအပ္လႉဒါန္းမႈကို ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက လာေရာက္သတင္းရယူခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ အဆိုပါေဆးပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ေလယာဥ္သည္ ည ၈ နာရီတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာရာ Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ ေနသည့္တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ Dr. Bai Chong ၊ ဦးေဆာင္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္(၆) ဦး ျပန္လည္ လိုက္ပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။
ျပန္လည္မထြက္ခြာမီ အဆိုပါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Dr. Bai Chong ႏွင့္အဖြဲ႕အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) ေဆးဝန္ထမ္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းက Video Call ျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ထိန္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကုသေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဆာင္႐ြက္မႈအတြင္း လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့မႈမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကုသထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားကိုမွ်ေဝေပးခဲ့မႈ ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳေဆးပစၥည္းမ်ားေပးပို႔လႉဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားရာ တ႐ုတ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါ တ႐ုတ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေဆးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။